कसरी बनाउने ढुङ्गाको भुकम्प प्रतिरोधी घर ? - IAUA
कसरी बनाउने ढुङ्गाको भुकम्प प्रतिरोधी घर ?
ramkrishna November 10, 2016	कसरी बनाउने ढुङ्गाको भुकम्प प्रतिरोधी घर ?
ढुंगाको घरलाई माटोले जोडेर बनाउँदा सो घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सुरुमा त निर्माण स्थलको छनौट नै मुख्य कुरा हो । पानी जम्ने स्थान, ढुंगा खस्ने स्थान, पहिरो जान सक्ने जस्ता स्थानमा घर निर्माण गर्नुहुँदैन । यस्तै माटो झरेको वा पुरुवा माटो भएको स्थान, नदीको वगर वा सीमसार स्थान, सतहमा चिरा परेको वा परेको जस्तो देखिएको स्थानमा घर बनाउनु हुँदैन । यस्तै भिरालो जग्गा छनौट गर्दा कम्तिमा २० ड्रि्री भिरालोपन भएको जग्गामा घर बनाउनर्ुपर्छ । २० ड्रि्री भन्दा बेसी भिरालो जमीनमा घर बनाउनु हुँदैन ।
साथै निर्माण स्थलको निरीक्षण गर्दा कम्तीमा २ वटा २ मिटरसम्म गहिरो खाल्डो खनेर परीक्षण गर्ने गर्नुपर्दछ । पहाडी क्षेत्रमा चट्टान भएको सतह भेटिएमा गहिराइ लिन सकिन्छ ।
म्ााटोको जोडाइमा ढुंगाको घर बनाउँदा घरको आकारमा पनि ध्यान दिइयो भने भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सकिन्छ । साधारण र नियमित आकारको जस्तै वर्गाकार, आयातकार वा वृत्ताकार अर्थात गोलो खालको घर निर्माण गर्नुपर्दछ । लामो साँघुरो घर निर्माण गर्नु हुँदैन । घरको लम्बाइ चौडाइको तीन गुणा भन्दा बढी हुनु हुँदैन । उचाइमा पनि घरलाई जतिसक्दा साधारण बनाउनर्ुपर्छ र सेटव्याक राख्नुहुँदैन । ढलानको पट्टी भएमा घर एक तला र त्यस माथिको बुइँगलसम्म सिमित राख्नर्ुपर्दछ । काठको पट्टी भएमा घर एक तलासम्म सिमित राख्नर्ुपर्दछ ।
यस्तै माटो जोडाइमा ढुंगाको घरलाई भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनका लागि घर निर्माण गर्दा चाहिने निर्माण सामग्रीमा पनि विशेष ध्यान दिनर्ुपर्दछ । सजिलैसँग टुक्रने, नरम र हल्का किसिमको ढुंगा प्रयोग गर्नु हुँदैन । गहिरो चिरा नपरेको ढुंगा मात्रै प्रयोग गर्नुपर्दछ । पाटा मिलेका ढुंगाहरु कम्तीमा ५० मिलिमिटर मोटो र कम्तीमा १५० मिलिमिटर लामो हुनर्ुपर्दछ । यस्तै डण्डी प्रयोग गर्दा, टि एम टी ५०० र कम्तीमा १४ प्रतिशत लचकता भएको वा टोर स्टील ४१५ र कम्तीमा १४ प्रतिशत लचकता भएको वा माइल स्टील र कम्तीमा २० प्रतिशत लचकता भएको डण्डी प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
यस्तै काठ प्रयोग गर्दा भार लिने ठाउँहरु जस्तै दलीन, थाम, पट्टी आदिमा राम्रोसँग उपचार गरिएको काठको प्रयोग गर्नुपर्दछ । यस्ता ठाउँमा सकेसम्म साल, सिसौ, खयर जस्ता कडा काठ प्रयोग गर्नुपर्छ ।
यस्तै ढुंगा जडान गर्ने माटा झार, पतिंगर, मल आदि जस्ता जैविक पदार्थ र गिर्खा, ढुंगा नमिसिएको हुनर्ुपर्छ । माटोमा खस्रो वालुवाको मात्रा ३० प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन । माटोलाई राम्ररी मुछेर नरम र लेसिलो तर नबग्ने बनाएपछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ । यस्तै कंक्रिट मसला बनाउँदा १ भाग सिमेन्ट, २ भाग बालुवा र ४ भाग रोडा मिलाएर तयार पार्नुपर्दछ ।
Previous Previous post: वास्तुशास्त्र अनुसार घर निर्माणमा कुन दिशा शुभ कुन अशुभ ?
Next Next post: कसरी बनाउने भुकम्प प्रतिरोधी घर?